Qodobada Kieran Wilson ee Martech Zone |
Maqaallada by Kieran Wilson
Kieran Wilson waa Maamulaha Suuqgeynta Dijital ah ee loogu talagalay Fahanka iswada, kaas oo dhawaan bilaabay Wordsmith for Marketing, oo ah barnaamij isku duba ridaya macmiilka ka warbixinaya wakaaladaha suuq geynta dijitaalka. Takhasus u leh istiraatiijiyadda suuq-geynta dijitaalka, suuq-geynta gudaha, iyo cabbiraadda iyo falanqaynta; Kieran wuxuu hadlaa oo wax ka qoraa mowduucyadan si isdaba joog ah. Waxay dhistay oo cabiratay sedex waaxood oo suuq geyn kala duwan ah oo salka ku haya, oo ay kujiraan mid loogu talagalay Omnicom hoosaad iyo mid kamida wakaalada suuq geynta warbaahinta bulshada.
Qirashada Suuqleyda SEO
Arbacada, Agoosto 13, 2014 Jimcaha, Agoosto 26, 2016 Kieran Wilson
Raadinta mashiinka raadinta waa hal shey oo suuqgeynta suuq geynta ah, waxayna noqon kartaa mid jahwareer iyo khiyaano leh sida calaamadda baarkinka ee magaalada New York. Waxaa jira dad aad u tiro badan oo ka hadlaya oo wax ka qoraya SEO qaar badana way is burinayaan. Waxaan la xiriiray tabarucayaasha ugu sareeya ee bulshada Moz waxaana weydiiyay isla seddex su'aalood oo isku mid ah: Waa maxay xeeladda SEO ee qof walba jecel yahay run ahaantii aan qiimo lahayn? Waa maxay xeeladda SEO ee muranka badan ee aad u malaynayso inay runti qiimo leedahay?